राष्ट्रको अस्मितामा आघातका केही सिलसिला :: दामोदर पौडेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२७ असार २०७७, शनिबार ०८:०३ English
राष्ट्रको अस्मितामा आघातका केही सिलसिला :: दामोदर पौडेल
राष्ट्रको एकताको सबलताले नै राष्ट्रको पहिचानलाई सार्थक बनाउँछ र राष्ट्रियता बलियो पनि हुन्छ । नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियानबाटै एकतामा बाँधिएको हो । पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा समेत राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ गते मनाइँदै आइएको थियो । यो सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्ने परम्परालाई तोड्यो । देशको निर्माणमा बलिदान गरेका पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन धेरै सपुतको नाम जोडिएको यो दिवसको अन्त्य हुनु राष्ट्रिय एकतालाई ध्यान नदिनु हो र यो क्रमशः राष्ट्रियतालाई उपेक्षा गरेको पनि हुन जान्छ ।
एकीकरणको प्रयासमा युद्धसमेत हुँदा केही गल्ती एकीकरणकर्ताहरूबाट भएका छन् । ती गल्तीलाई महसुस गर्दै मूलभूत रूपमा एकताको पक्षमा हामी रहनुपर्ने हो र राष्ट्र रहनुपर्ने हो । राम्रो लक्ष्यका लागि भएका काममा भएका गल्तीको तुलना पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै गाडेको घटनासँग तुलना गर्न सकिँदैन । यो अपराधमाथिको महाअपराध थियो भने पृथ्वीनारायणका समयमा भएका केही कमजोरी राम्रो लक्ष्यमा गरिएको गलत कार्यनीति मात्र थियो । तर, यो अहिलेको सरकारबाट राष्ट्रिय एकताको सम्मान भएन र जनताको एकताको भावनाको पनि सम्मान भएन । डेकेन्द्रको हत्यालाई जायज मान्ने सरकारले एकीकरणको अभियानलाई जायज मानेन ।
त्यस्तै २००७ सात सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । अहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै आएकोमा सहिद गेटमा भएको त्रिभुवनसमेतका प्रजातन्त्रका योद्धा र सहिदहरूको सम्मान गर्ने थलो र प्रतीकको रूपमा रहेको स्थानलाई यो सरकारले हटाउन चाहेको थियो । पछि विभिन्न प्रयासपछि रोकियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलाको चलनअनुसार सहिदगेटमा गएर सहिदको सम्मान गर्ने परम्परालाई पनि ब्रेक गरे । यसको अर्थ उनी प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्दा राणाशाहीको वा अर्को तानाशाहीको पक्षमा नै थिए र छन् भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । त्यो नलागे पनि प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रको अवस्थामा हामी पुगेकोमा उनी यसको पक्षपाती होइनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतासँग नै बेखबर सरकार राष्ट्रियताप्रति सजग रहन सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नदेखिनु र लोकतन्त्रको विपक्षमा रहनुले नेपाली हुनु र लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुको औचित्यमा पनि सरकारबाट प्रश्नचिह्न लगाइएको छ । सायद यही तथ्यको कास्टिङ प्रचण्डले गरेका थिए । उनले दक्षिण एसियायी सोभियत बनाउने भनेकै हुन् । यसको अर्थ सोभियत सङ्घका बाँकी राष्ट्रलाई रुसले कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदा थिचेको र मिचेकोजस्तै दक्षिण एसियायी सोभियतमा कसले कसलाई पेल्ने हो भन्ने उजागर गरिरहन पर्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त प्रस्टै नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने अरू देशका नै हुन् भनेर आफू विदेशीको आशीर्वादबाट प्रधानमन्त्री बनेको प्रस्टै पारेका हुन् । तर, हामीले उनीहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ वा थाकेर वा डराएर उनीहरूको विरोध गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
बाबुरामले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेमा यो देश सव–मर्ज (अरू देशको उपनिवेशजस्तो हुने) हुने बताएका हुन् । यति मात्र होइन आर्थिक अवस्था बिगार्ने कार्य पनि उनीहरूबाटै भएका हुन् । उनीहरूले हिंसात्मक गतिविधि चाल्नभन्दा पहिला नेपालको प्रतिवर्ष आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थियो । माओवादीको कारणले त्यो करिब शून्यमा झरेको हो । विदेशीले नेपाली युवालाई रोजगारी नदिएको भए आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने थियो नै । माओवादीकै कारणले देशका उद्योगसमेत धराशायी भएका हुन् । यसप्रकार माओवादी नै विकास अवरुद्ध गर्ने र यस्तै रहेमा देश ‘सवमर्ज’ हुन्छ भनी आफैँले भन्दै राष्ट्रघातको तयारी गर्नु जनतालाई चुनौती दिनु हो ।
अर्कोतर्फ माओवादीले भारतसँग बिप्पा सम्झौता आफ्नै सक्रियतामा गरेको हो तर चीनसमेतका देशहरूसँग त्यहीप्रकारको सम्झौता गर्न यो सरकार चाहेको छैन भन्ने देखिएकै छ । बाबुराम सरकारले देशको विमानस्थल विदेशीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको त सबैले सुनेकै विषय हो । त्यसमा पूर्ण सफलता नभएपछि माओवादी अब अध्यागमनको कार्य विदेशीलाई जिम्मा लगाउने पक्षमा लागेकोबारे सञ्चारमाध्यममा आएका छन् ।
विख्यात समाचारमाध्यम विकिलिक्सले माओवादी लडाकुलाई भारतमा राज्य पक्षबाट तालिम दिने कार्य गरेकोलाई प्रस्ट गर्दै अमेरिकी राजदूतले भारतसँग भारतको दोहोरो कार्यबारे सोधेको जानकारीलाई ओपन गरेको थियो । यो तथ्यलाई विवेक शाहले लेखेको पुस्तकले पनि पुष्टि गर्दछ ।
हामीले सुनेकै छौँ– सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ । माओवादी (जसलाई अहिले एमाओवादी भनिन्छ) लाई वैद्य माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले बाक्कै भएर बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ कि बाबुराम सरकार र प्रचण्डहरू विदेशी दलाल र सिद्धान्तहीन भएको र उनीहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार भएको र अवसरवादी भएकोले यो दलबाट अलग्गिनुपरेको हो । माओवादी वैद्यकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले ०६९ साल पुस २५ गते सञ्चारमाध्यममा दिल्लीले यो सरकारको माध्यमबाट परराष्ट्रनीति, आर्थिक र रणनीतिक अधिकार लिन लागेको, दिल्लीले नै गर्दा यो सरकारलाई वैधानिक माध्यमबाट हटाउन नसकिने बनाइएको, भारतको चाबीमा चलेकोसमेत तथ्यलाई उल्लेख गर्नुभएको छ । माओवादी हिंसा ठीक थिएन, तर त्यसमा इमानदारीका साथ यो कार्यले देशलाई राम्रो गर्दछ भन्ने भ्रममा परेर लागेकाहरू सबैजसो वैद्य माओवादीमा छन् । एमाओवादीमा अहिले क्रमशः हिंसापछि प्रवेश गरेका चैतेहरू छन् । उनीहरूले सिद्धान्तका लागि काम गरेका छन् कि पैसा र शक्तिका लागि गरेका छन् भन्ने प्रस्ट देखिइरहेको छ ।
मोहन वैद्य र सीपी गजुरेललाई भारतमा थुन्न लगाउने कार्य भएकै हो । त्यतिबेला अहिलेका एमाओवादीका नेताहरू भारतमा नै कथित रूपमा राज्यसंरक्षित भूमिगत जीवन विलासिताका साथ बिताएको अनुभव भएको वैद्य माओवादीहरूले महसुस गरिरहेका छन् । एउटै दलभित्र अर्को देशले देखिनसहनेहरू र त्यही देशले माया गर्नेहरू हुनु पनि विडम्बनापूर्ण नै हो । यी तथ्यहरूले गर्दा एमाओवादी विदेशीको इसारामा चलेको देखिन्छ र राष्ट्रको अस्मिताको विपक्षमा रहेको छ भन्ने प्रस्ट आधारहरू छन् । यसमा भारतलाई दोष किन दिने ? भारत त आफ्नो देशको हित चाहन्छ नै, नेपालको हित त नेपालीले चाहनुपर्ने हो ।
यो अवस्थामा विदेशी मित्रहरूले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने तथ्य यो हो कि कम्युनिस्टबाहेकको तानाशाही व्यवस्थाले विदेशमा आफ्नो प्रभाव त्यति पार्न सक्दैन, त्यो भुटान वा अरू नै किन नहोस् । तर, कम्युनिस्ट तानाशाहीले माया गर्नेलाई पनि सर्पले जस्तै टोक्नेछ ।
ठूलो दल एमाओवादी भएकाले यसमा प्रवेश गर्नेहरूले ठूलो हुनुको फाइदा लिइरहेको धेरैले महसुस गरिरहेका छन् । जे भए पनि माओवादीको माथिको परिदृश्यले यो दल र यसका नेताहरू कसको हित र पक्षमा काम गरिरहेका छन् भन्ने देखिएको सत्य हो । समयमा नै जनताले सजगता नअपनाएमा हामीले सिक्किम र तिब्बतको अवस्था व्यहोर्नु नपरे पनि भुटानको जस्तो संरक्षित राष्ट्रको रूपमा रहनुपरेमा पनि राम्रो त हुँदैन । यसको अर्थ हामी तिब्बत र सिक्किमको अहिलेको अवस्था र त्यहा“का जनताले चाहेको विषयलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ । भारत र चीनको विपक्षमा हामी छैनौँ तर नेपालको बारेमा अब पनि नसोच्ने हो भने कहिले सोच्ने ? एमाले नेता भीम रावलले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको छ कि माओवादीले संविधानसभाको समितिमा नेपालको नाम र झन्डा नै बदल्न चाहेको थियो । यस्ता कार्यले के सन्देश दिन्छ ? माधव घिमिरेको राष्ट्रिय गानको सानो अंश– रहौँला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे ।
१० माघ २०६९, बुधबार ०८:०७ मा प्रकाशित